Ahoana ny fananganana ny maha-izy azy ny marika | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Graphic Design, Inspiration
Ny maha-maso dia ny fisehoana ara-batana amin'ny marika. Tena zava-dehibe izany satria mampita sy maneho ny filozofia sy ny soatoavin'ny orinasa amin'ny besinimaro izy io. Ny mombamomba ny fahitana ratsy dia afaka mampita endrika diso an'ny orinasa, manimba ny lazany orinasa, toy ny maha-mazoto mahita maso manampy amin'ny fanamafisana ny sary matanjaka sy mirindra. Amin'ny fotoana maha-zava-dehibe ny serasera ary betsaka, ny orinasa dia tsy maintsy miezaka mifehy izay ampitainy, amin'ny fiheverana fa mandefa hafatra foana izy ireo, na tian'izy ireo na tsia. Ny famolavolana paikadin'ny fifandraisana no hany fomba hitarihana ny sary fa ny mpandray anjara hampifandraisin'izy ireo ny orinasa ary ny mombamomba ny maso dia tsy isalasalana fa ao anatin'io paikady io.
Ny orinasa dia miahiahy bebe kokoa amin'ny fandehanana any an-tsena miaraka amina maso sy saina manintona mifanaraka amin'ny fanahin'izy ireo sy ny tanjon'ny orinasa. Ireo fikambanana izay manana traikefa an-taonany maro amin'ny sehatra misy azy avy dia manavao ny mombamomba azy ireo hiresaka amin'ny toe-javatra sasany amin'ny lazany na manandrana manavao ny sarin'izy ireo hifanaraka amin'ny ankehitriny (toy ny tranga Burger King na McDonalds). Ny marika lehibe, ohatra amin'ny resaka fahombiazan'ny orinasa, dia nanadio ny mombamomba azy ireo nandritra ny taona maro. Apple, ohatra, dia nampiditra fanovana tsy tapaka hitadiavana ireo lakile izay mahatonga azy io ho referansa ankehitriny momba ny famolavolana marika. Saingy… Ahoana no fananganana ny mombamomba ny marika? Aza mitsahatra mamaky satria izany ihany no holazaiko anao amin'ity lahatsoratra ity.
1 Fandaminana mialoha
1.1 Marika vao noforonina
1.2 Orinasa manana rakitsoratra sasany
2 Fikarohana: fantaro ny fifaninanana, ny toe-javatra ary ny tsena
3 Mamorona boky torolàlana momba ny maso amin'ny orinasa
3.1 Iraka, vina ary soatoavina
3.5 Singa fanohanana an-tsary
4 Fanamarihana farany: manohana
Fepetra takiana fototra iray ahafahan'ny mombamomba ny maso miasa iray dia ny tsy fiovany, mifanaraka amin'ny maodely fandraharahana, miaraka amin'ny soatoavin'ny orinasa ary mifanaraka amin'ny singa mandrafitra azy. Ity fifanarahana ity dia tsy azo atao raha tsy amin'ny drafitra amin'ny dingan'ny famoronana ary miaraka amina asa fikarohana feno.
Marika vao noforonina
Rehefa marika manomboka amin'ny aotra, lojika fa misy fironana hanandrana. Miova ny orinasa rehefa mandeha ny fotoana ary voafaritra indray mba hifanaraka amin'ny filan'ny tsena (izay miova tsy tapaka). Na izany aza, alohan'ny hanombohana ny famolavolana ny mombamomba ny marika ilaina ny mamaly fanontaniana fototra sasany:
Inona ny iraka, vina ary soatoavin'ny orinasa?
Inona ny maodelin'ny orinasa?
Inona ny mpihaino kendrena? (Iza no lazaiko amin'ny orinasa)
Inona no toerana tiako hipetrahan'ny orinasa eo amin'ny tsena?
Inona avy ireo tanjon'ny orinasa?
Inona avy ireo tanjon'ny fifandraisana?
Ilaina ny famaliana ireo fanontaniana ireo, satria olana izy ireo, amin'ny maha orinasa antsika, tsy maintsy haintsika ny mifampiresaka (na anatiny na ivelany). Raha tsy haintsika ny mamaly ireo fanontaniana ireo amin'ny teny, ahoana no fomba hanaovantsika izany amin'ny singa hita maso amin'ny alàlan'ny famantarana ny orinasa?
Orinasa manana rakitsoratra sasany
Raha ireo orinasa manana rakitsoratra manokana, ireo orinasa izay mety efa manana ny maha izy azy azy saingy te-hanavao azy dia mitovy ny fomba fiasa. Na izany aza, amin'ity fotoana ity dia mila raiso ny sary misy amin'izao fotoana izao ny marika izay natambatra nandritra ny tantaran'ny orinasa. Ny sarin'orinasa dia, raha ny tena izy, ny sary ananan'ny besinimaro an'ny orinasa, ao anatin'izany ny fitsarana an-tendrony izay ananantsika talohan'ny nahalalantsika ny marika sy ny didim-pitsarana noforoninay aorian'ny fahafantarana azy ireo sy vokatry ny traikefa.
Ny mombamomba ny maso voaorina tsara dia manampy be amin'ny fitarihana ny olona mpandray anjara amin'ny sary izany, amin'ny maha orinasa anay, tianay hampitaina. Raha efa miasa ny orinasanao, alohan'ny handraisanao tena amin'ny dinganà fanavaozana ny maha-izy anao, dia manahy manontania dia fantaro inona no sary ananan'ny mpihaino anao momba ny marika. Rehefa fantatrao izany dia manontania tena raha izany no sary tianao hampitaina, ampahany amin'ny lesoka (na tsara kokoa na ratsy kokoa) ny maha-izy anao azy ary inona no tokony hampandraisana anjara anao amin'ny maha-maso vaovao.
Fikarohana: fantaro ny fifaninanana, ny toe-javatra ary ny tsena
Tahaka ny maha-zava-dehibe ny fahalalana ny orinasa hamaritana ny mombamomba ny marika, Ny fahalalana ny tontolon'ny toerana hisian'ny orinasa dia manampy ny famolavolana mba hahomby kokoa. Alohan'ny handefasana ny marikao, hadihadio izay miasa amin'ny tontolo iainana izay handraisanao anjara sy hahitanao izay ataon'ny orinasa hafa ao amin'ilay sehatra Ny fianarana amin'ny lesoka sy ny fahombiazan'ny fifaninanana dia hevitra lehibe! Raha eo amin'ny lafiny maha-maso dia misy ihany koa ny lamaody ary ny tsy fahafantarana azy ireo dia mety hitarika anao hamorona marika efa lany andro izay hahatsapa anao eny an-tsena ho toy ny orinasa lany andro ary tsy afaka mandray fanamby ankehitriny, havaozy tsy tapaka ny kolontsaina jerenao.
Mamorona boky torolàlana momba ny maso amin'ny orinasa
Boky fanondroana maso momba ny maso mampivondrona ireo singa rehetra mandrafitra ny maha-izy azy ny marika ary izy io dia fitaovana tena ilaina izay manampy amin'ny fanatratrarana ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny serasera orinasa: coherence. Avy eo dia holazaiko aminao inona ny singa ilaina amin'ny boky torolàlana momba ny maso ary izany, noho izany, dia tsy maintsy faritana sy noforonina tamin'ny dingan'ny fananganana ny mombamomba ny marika.
Iraka, vina ary soatoavina
Ity fizarana ity dia toa mahazatra anao, saingy matetika dia ampidirina ao amin'ny boky fampianarana momba ny maso izany. Izy io dia fomba iray hitarihana ny famolavolana ny ambiny amin'ireo singa amin'ny maha-izy azy ny marika izay, mazava ho azy, dia tsy maintsy noforonina hanamafisana ireo soatoavina ireo ary ampitaina amin'ny besinimaro ny iraka, ny fahitana sy ny fanahin'ny orinasa.
Tsy maintsy fararanao hoe inona ny loko misy loko Amin'ny marika. Ny loko dia manana a fahefana ifotony rehefa mampita hevitra any mpandray anjara. Ohatra, ny fanovana ny loko izay nataon'i McDonalds dia nanolotra ilay rojom-bidy handefasana hafatra mifanentana amin'ny vanim-potoana, manandrana mampifandray foto-kevitra vaovao amin'ny marika misy azy: vokatra vaovao.
Saingy ny paleta miloko tsara dia tsy vitan'ny hoe manampy hifanaraka bebe kokoa amin'ilay hafatra tadiavintsika hampitaina, misy marika nahatratra izany misy loko mitambatra mifandray amin'ny vokatrao (toy ny an'i Levi, ohatra, misy mena sy fotsy).
Ny typography dia iray amin'ireo singa hita maso mandrafitra ny mombamomba ny marika. Rehefa dinihina tokoa, dia azo nohazavaina ho toy ny feo timbre. Ny zava-misy fa ny orinasa dia mifampiresaka hatrany amin'ireo fitoviana typografika mitovy, dia manampy ny besinimaro hampifandray ireo hafatra ampitaina amin'ny marika, nefa tsy mila mahita singa hafa amin'ny maha solontena azy amin'ny sary famantarana.
Izy io angamba no singa maneho maso indrindra amin'ny marika. Matetika, Manana hery an'ohatra lehibe izy ireo ka io no iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra tokony ho tsikaritry ny orinasa ary mamorona sary manodidina ny hetsika ataon'izy ireo. Ilaina ny fananana sary miavaka sy manaitra satria hanampy anao ho eo amin'ny fiarahamonina izany izay mampivelatra anao amin'ny maha orinasa anao Jereo ny tranga Starbucks! Ohatra tsara amin'ny fomba fitantanan'ny orinasa iray hahatratra ny mpihaino amin'ny alàlan'ny sary famantarana, saika mamorona vondrom-piarahamonina manodidina azy.
CNy fandraisana mpiasa matihanina hamolavolana ny logo an'ny orinasa dia fampiasam-bola tsara ary androany ianao dia afaka miditra amina endrika maro isan-karazany amin'ny sehatra an-tserasera, ohatra, maro freelancers manolotra ny tolotr'izy ireo ho an'ny famolavolana logo ao amin'ny Fiverr ary misy ny tolotra ho an'ny karazana paosy sy fomba rehetra.
Ny fampiasa amin'ny fampiasana ny sary famantarana dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny boky fampianarana momba ny maso: ny kinova misy rehetra sy ny tokony hampiasana ny dikanteny tsirairay, ny habeny, ny sisiny ...
Singa fanohanana an-tsary
Visual visite tena ilaina izy ireo rehefa mampifanaraka ny hafatrao amin'ny sehatra sy haino aman-jery samihafa. Raha mifampiresaka amin'ny tamba-jotra sosialy ianao, ohatra, dia mety tsy te-hameno ny famoahana rehetra miaraka amin'ny sary famantarana ny orinasa ianao, ny fanananao fitaovana hita maso hafa dia hahatonga ireo izay mandeha amin'ny lahatsoratra iray mankany amin'ny iray hafa hampifandray azy io haingana amin'ny marikao, na tsia tsy ny sary famantarana. Na amin'ny tranga hafa, Izy ireo dia azo ampiasaina hanamafisana io fifandraisana io amin'ny marika amin'ny fampielezana doka Uber dia folo raha ny fampiasana sary manohana! Jereo ny hakingan'izy ireo mampiasa ny "U" an'i Uber hamoronana tabilao ho an'ny canopy sy takelaka fanaovana takelaka.
Fanamarihana farany: manohana
Rehefa mandrafitra ny maha-izy azy dia zava-dehibe ny mieritreritra ireo mpanohana izay hifandraisan'ny marika, satria tsy ny rijan-tsary hita maso rehetra no miasa tsara amin'ny media rehetra. Hisy singa izay miasa tsara amin'ny tambajotra sosialy saingy tsy misy dikany amin'ny haino aman-jery ara-batana sy ny mifamadika amin'izany. Ny sombinao dia tsy maintsy eritreretina mifototra amin'ny toerana halehany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana ny fomba fananganana ny maha-maso ny marika